Inona no ilana asidra klavulanika? - BALLYA
Posted on Febroary 20, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona ny asidra clavulanic?
Vokatry ny bakteria
Amoxicillin sy Clavulanate Potassium
Fahombiazana sy famantarana
Vokatry ny asidra amoxicilline / clavulanic
Ny voka-dratsin'ny Amoxicillin
Vokatry ny asidra Clavulanic
Vokatry ny potasioma clavulanate
Asidra Clavulanic an'ny fifaninanana tsy azo ivalozana inhibitor beta lactamase, izay afaka tsy mampihetsika ny anzima rehefa voafatotra mafy amin'ny anzima, noho izany dia misy vokany mahery tsy ho an'ny lactamase beta an'ny Staphylococcus aureus, fa koa amin'ny lactamase beta ny grama bacilli ratsy. Ny fitambaran'ny penisilinina ary cephalosporins manatsara be ny asan'ny bakteria, ary afaka mampihena be ny fatran'ny tsindrona (MIC) farafahakeliny.
Ny zava-mahadomelina dia afaka mampitombo ny vokany imbetsaka hatramin'ny folo, mba hahafahan'ny soritr'aretina mahazaka zava-mahadomelina hamerina ny fahatsapany. Asidra Clavulanic dia atiny misy oksizenina vaovao beta lactam antibiotika novokarin'i Streptomyces. Potasioma Clavulanate dia kristaly toy ny fanjaitra ary mora levona anaty rano.
The lactamase beta novokarin'ny bakteria hydrolyzing ary ny fampidinana antibiotika β-lactam sasany no tena miady amin'ny fanoherana ny zava-mahadomelina. Methoxypenicillin no fanoherana ny anzima semi-synthetic voalohany penisilinina. Taorian'izay dia maro ny penicillins tsy mahazaka anzima semi-synthetic no nivoaka, toy ny oxacillin, cloxacillin ary dicloxacillin. Ny penicillin tsy mahazaka enzimme dia mpamaky lactamase beta mifaninana azo ovaina. Rehefa esorina ny mpanakana ny zava-mahadomelina dia azo averina amin'ny laoniny ny asan'ny anzima, ka ratsy ny hetsika fanakanana ny penicillinase, izay mitondra fanelingelenana lehibe amin'ny fampiharana klinika.
Ity vokatra ity dia mpamaky beta lactamase beta-be spectrum, izay tsy manana afa-tsy fihetsiketsehan'ny bakteria malemy, fa misy fiatraikany mahery amin'ny lactamases beta isan-karazany. Ary azo ampiarahina mafy amin'ny ankamaroany lactamases beta mamokatra conjugate tsy azo ovaina ary miaro penisilinina or cephalosporins tsy mahatohitra anzima noho ny fahasimban'ny anzima, manatsara ny asan'ny bakteria ary manitatra ny fihanaky ny bakteria. Raha atambatra amin'ny penicillins sy cephalosporins dia azo ahena be ny fatran'ny clavulanic.
Potasioma Clavulanate dia kristaly toy ny fanjaitra ary mora levona anaty rano.
3. Vokatry ny bakteria
Asidra Clavulanic dia antibiotika misimisy ihany, saingy malemy ny fiasan'ny bakteria. Izy io dia manana fatrana mahasakana 30 ～ 60μg / m1 ho an'ny bakteria Gram-négatip sy bakteria tsara. Tsy mahomby amin'ny Pseudomonas aeruginosa sy Enterococcus. Ny MIC ho an'ny Neisseria gonorrhoeae dia 5μg / m1. Ny MIC an'ny bakteria Gram-positive toa an'i Streptococcus dia 12-15μg / ml, ny MIC an'ny Bacteroides fragilis dia 13.1μg / ml, ary ny MIC ho an'ny ankamaroan'ny bakteria hafa dia 30-125μg / ml.
4. Fitsipika momba ny asa
Asidra Clavulanic dia mpanakan-tsakan-tsakan-karazany. Izy io dia mandaitra amin'ny beta lactamase novokarin'ny bakteria miabo tsara (toy ny Staphylococcus aureus) sy ny karazana I, II, IV ary ny karazana leta beta beta beta novokarin'ny bakteria ratsy-grama, saingy misy vokany manakana tsy mahomby amin'ny cephalosporinase type I.
Asidra Clavulanic dia afaka manitatra ny tahan'ny antibiotika tsy mahazaka lactamase beta, toy ny penisilinina g, ampicillin, amoxicillin or cephalosporine II (cephalothin), mampitombo ny asan'ny bakteria, ary mampitombo ny fahombiazan'ny bakteria β -Endophthalaminase, toy ny Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pneumoniae bacillus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Influenza bacillus ary Fragile bacillus, sns. vokany amin'ny bakteria amizisilinika na ceftizidine mora tohina miaraka asidra clavulanic.
Ny tahirin-kevitra momba ny fitsaboana ao amin'ny BRL 25000 dia nitatitra fa ny fitantanana am-bava dia misy fiatraikany tsara amin'ny aretin'ny urethral sy ny lalan-dra vokatry ny Escherichia coli, Proteus isan-karazany, bacilli mamaivay, bacilli Influenza, ary pneumococcus.
Asidra Clavulanic irery tsy mandaitra. Ny anzima dia tsy mihetsika intsony raha ampifangaroina mafy lactamase beta hiarovana ny penisilinina or cephalosporine antibiotika izay tsy mahatohitra ny anzima tsy ho ringana, mba hahafahan'izy ireo miditra ao amin'ilay tranonkala mavitrika ary hampihatra ny voka-dratsin'ny bakteria, handresy ny fanoherana ny bakteria hanatsarana ny fitsaboana.
Ho fanampin'izay, ny fitambaran'ny asidra clavulanic ary amoxicillin mahazatra klinika, ary amoxicillin ary potasioma clavulanate dia zava-mahadomelina solontena.
Amoxicillin sy potasioma clavulanate dia mety ho an'ny aretin'ny taovam-pisefoana ambany, otitis media, sinusitis ateraky ny lactamase beta mamokatra Haemophilus influenzae sy Moraxella catarrhalis; lalan-dra sy ny hoditra ary ny aretin-koditra malemy nateraky ny Staphylococcus aureus mamokatra beta lactamase sy bakteria bakteria mamokatra anzima toy ny Escherichia coli sy Klebsiella; azo ampiasaina amin'ny areti-mifindra malemy na antonony vokatry ny enterococci koa izy io. Ity vokatra ity dia azo ampiasaina amin'ny aretina isan-karazany voalaza etsy ambony ateraky ny fihenan'ny bakteria tsy voan'ny anzima amin'ireo bakteria voalaza etsy ambony. Ity vokatra ity dia sombina fotsy na fotsy tsy misy fotsy, manitra sy mamy. Ity vokatra ity dia fanomanana fitambarana, ary ny singa dia amoxicillin sy potasioma clavulanate.
2. Fahombiazana sy famantarana
Ity vokatra ity dia mety amin'ny aretina isan-karazany ateraky ny bakteria mora tohina, toy ny:
Fihanaky ny lalan-pisefoana ambony: sinusitis, tonsillitis, pharyngitis, sns.
Fihanaky ny taovam-pisefoana ambany: bronchitis maranitra, fanamafisana ny bronchitis mitaiza, pnemonia, abscess havokavoka ary fiaraha-miombon'antoka bronchial sns.
Fihanaky ny rafitra urinary: cystitis, urethritis, pyelonephritis, prostatitis, aretim-pivalanana pelvic, Neisseria gonorrhoeae infection urinary tract sy chancre malefaka, sns.
Ny aretin-koditra sy ny hoditra malefaka: vay, vavony, sela selula, aretin-koditra, sepsis intra-kibo, sns.
Aretina hafa: otitis media, osteomyelitis, sepsis, peritonitis ary postoperative aretina.
Ity vokatra ity dia fanomanana fitambarana voaforon'ny amoxicillin sy Potasioma Clavulanate amin'ny tahan'ny 7: 1. Amoxicillin sy ampicillin dia misy vokany mikraoba manohitra ny saro-pady. Izy io dia miasa indrindra amin'ny dingan'ny famokarana zavamiaina bitika amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fifangaroan'ny peptides amin'ny rindrin'ny sela.
Potasioma Clavulanate manana beta lactam firafitra mitovy amin'ny penicillin. Izy io dia afaka mampihetsika ny ankamaroan'ny anzima novokarin'ny bakteria tamin'ny alàlan'ny fanakanana ny toerana mavitrika beta lactamase, indrindra ho an'ireo laktamase beta manan-danja sy manelanelana plasmid (ireo anzima ireo dia matetika mifandray amin'ny fiovan'ny penicillin sy cephalosporine fanoherana) miasa tsara kokoa.
Ny valin'ny fitsapana in vitro sy ny fampiasana klinika dia naneho fa io fitambarana io dia mandaitra amin'ny ankamaroan'ny zavamiaina bitika manaraka; Microorganism aerobic gram-positive: Staphylococcus aureus (karazana famokarana beta-lactamase ary tsy mpamokatra beta-lactamase) Ny staphylococci mahatohitra Cillin / oxacillin koa dia mahatohitra an'io vokatra io.
4. Dosis amoxicillin clavulanate
olon-dehibe: pnemonia sy aretina hafa mahery vaika: 625 mg (ao anatin'izany ny amoxicillin 500 mg) am-bava indray mandeha isaky ny 8 ora, ny fizotran'ny fitsaboana dia 7-10 andro. Fihanaky ny aretina ankapobeny: in-1 375 mg (ao anatin'izany ny amoxicillin 250 mg), indray mandeha isaky ny 8 ora, dia 7-10 andro ny fitsaboana.
Ankizy: Ny zaza vao teraka sy ny zaza latsaky ny 3 volana: 15 mg / kg isaky ny 12 ora miorina amin'ny amoxicillin; fatra ho an'ny zaza latsaky ny 40 kg: mifototra amin'ny amoxicillin, 25 mg / kg isaky ny 12 ora na 20 mg / isaky ny 8 ora ho an'ny aretin-tratra ankapobeny, 45 mg / kg isaky ny 12 ora ho an'ny aretin-tratra mavesatra kokoa, na 40 mg / kg isaky ny 8 ora, arakaraka ny hamafin'ilay aretina. Ny fizotry ny fitsaboana dia 7-10 andro; tapany ny fatran'ny aretina hafa. Ny zaza mihoatra ny 40 kg dia azo omena toy ny fatra olon-dehibe.
Ireo marary voan'ny renal function: Tsy ilaina ny mampihena ny tahan'ny fahazoan-dàlana famoronana «30ml / min; Amoxicillin 250-500 mg isaky ny 12 ora ho an'ireo izay manana tahan'ny fahazoana «30ml / min; Amoxicillin 250 ～ 500 mg isaky ny 24 ora ho an'ireo izay manana tahan'ny fahazoana «10ml / min».
Marary hemodialisis: Raha ny hamafin'ilay aretina dia amamoxicillin 250-500 mg no ampiasaina isaky ny 24 ora, ary ampiana fatra mandritra ny faran'ny hemodialisis.
Ity vokatra ity dia mety amin'ny tsimok'aretina ambanin'ny taovam-pisefoana, otitis media, sinusitis ateraky ny famokarana anzima, Haemophilus influenzae sy Moraxella catarrhalis; mpamokatra anzima Staphylococcus aureus ary bakteria Enterobacteriaceae mamokatra anzima toy ny Escherichia coli, Klebsiella Respiratory tract, lalan-dra sy urina ary aretin-koditra malemilemy; ary azo ampiasaina amin'ny areti-mifindra malemy na antonony vokatry ny enterococci koa izy io. Ity vokatra ity dia azo ampiasaina amin'ny aretina voalaza etsy ambony ihany, vokatry ny bakteria tsy mamokatra anzima.
1. Ny voka-dratsin'ny Amoxicillin
Ny marary dia mety misy fihenan'ny alikaola aorian'ny fihinanana amizisilinilasy. Ny fihenan'ny alika urticaria sy ny aretin-koditra dia fiatraikany ratsy amin'ny marary voan'ny amoxicillin. Ny marary manana fiatraikany ratsy toy izany dia mety miaraka amin'ny tazo, mangidihidy hoditra, fanaintainana ary na dia dermatitis exfoliative aza, tsemboka be, mifintina ary soritr'aretina hafa. Hitan'ny fandinihana fa ny fanehoan-kevitra mahazaka vokatry ny amoxicillin dia matetika no mitranga ao anatin'ny 3-30 minitra aorian'ny fitsaboana ny zava-mahadomelina, ary manana ny toetran'ny fiandohan'ny haingana sy ny fivoaran'ny aretina haingana.
Amoxicillin afaka miditra ao amin'ny sela voa mba handray anjara, ka mety hanimba ny sela voa ao amin'ny marary, ka hanimba ny fiasan'ny voa. Miaraka amin'ny taona, mihena tsikelikely ny asan'ny voa ny antonony sy ny be taona. Raha mampiasa amoxicillin be loatra ny marary toy izany amin'ny fitsaboana, dia mety hampitombo ny enta-mavesatry ny voany izany, hampihena ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina amin'ny vatana, ary hamorona kristaly mivaingana ao amin'ny urine, izay afaka manakana ny lalan-drany ary mahatonga azy ireo vaky sy mandeha hemorrhage, mitarika amin'ny soritr'aretina toy ny ra ao amin'ny urine sy ny colic renal.
2. Vokatry ny asidra Clavulanic
Asidra Clavulanic manana poizina kely ary misy vokany kely amin'ny fampiharana klinika. Ny olona tsy mahazaka penicillin dia tsy tokony hampiasa izany.
3. Vokatry ny potasioma clavulanate
Ny marary vitsivitsy dia mety manana voka-dratsin'ny gastrointestinal malefaka toy ny maloiloy, mandoa ary mivalana. Raha mitranga ireo vokatra hafa ireo dia azo atao ny mihinana zava-mahadomelina amin'ny fiandohan'ny sakafo ary hanjavona ireo soritr'aretina ireo.
Indraindray dia mipoitra ny aretin'ny urticaria sy ny kitrotro. Rehefa mipoitra urticaria sy rashes toy ny kitrotro dia atsaharo ny fampiasana an'io vokatra io.
Maromaro ny marary marobe no manana fiasan'ny aty tsy maharitra mandritra ny fotoana fohy, nephritis interstitial ary fikorontanana anaphylactic.
Vitsy ny marary mety manana neutropenia, eosinophilia, tazo fanafody ary asma.
Asidra Clavulanic ny tenany dia tsy dia ilaina loatra, fa noho ny mampiavaka azy manokana dia azo ampifangaroina amin'ny fanafody hafa izy io mba hampisy vokany mahafa-po. Amoxicillin sy potasioma clavulanate dia tranga mahomby, izay azo ampiasaina hitsaboana aretina isan-karazany.
Wikipedia: Asidra Clavulanic
MedlinePlus: Amoxicillin sy asidra Clavulanic